✶Indawo Yokuhlala Yepenthouse Engabiziyo-indawo Entle Yabucala✶ - I-Airbnb
✶Indawo Yokuhlala Yepenthouse Engabiziyo-indawo Entle Yabucala✶
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJose Y Alicia
UJose Y Alicia yi-Superhost
Le ndlu intle, ngelixa ikwiSithili seMbali, inikwe kumgangatho ofanelekileyo.
Yeyona ndawo ifanelekileyo yokubuyela kwindawo entle kunye nekumgangatho ophezulu, ebekwe entliziyweni yakudala yaseToledo.
Yeyona ndawo igqibeleleyo yokufumana iSithili seMbali ngendlela ekufanele ukuba yiyo. Zilungiselele ukuphefumlelwa! Ikufutshane kakhulu kwezinye iisayithi ezintle. Ulonwabo oluqinisekisiweyo kunye nokuphumla.
Jonga nolunye uluhlu lwethu: https://www.airbnb.es/rooms/16826868
Indawo ekhuseleke kakhulu!
Le ndlu inesitayile esigqwesileyo yenza indawo yokubaleka etofotofo, yonke i-intshi elungiselelwe imfezeko.
Ilungele izibini ezifuna "ikhaya elikude nekhaya" elingaqhelekanga okanye ikhefu lothando kwisixeko esihle.
Ikwafanela abahambi ababodwa kunye nabahambi beshishini abafuna indawo esembindini.
Ilungele abantu abafuna ikhaya elimnandi laseSpain.
Ukhululekile, uzolile kwaye ufanelekile. Siyakuthanda ukuhamba loo mayile eyongezelelweyo ukuze uzive ngathi usekhaya.
Ngaphandle kwamathandabuzo, le ndawo yenza isixeko sokwenyani "imvuselelo" kwabo bafuna enye. Siqinisekile ukuba uya kulonwabela eli khaya njengathi.
Ukhuseleko lwakho yeyona nto iphambili kuthi: siyakufanelekela ukufumana iNkqubo yokuCoca ka-Airbnb.
Amashiti ethu kunye neetawuli zicocwa ngononophelo kwaye zibulawe iintsholongwane kwindawo yokuhlamba iimpahla.
- Ibhedi ekumgangatho ophezulu yelinen
-INetflix kunye neVidiyo eyiNkulumbuso yaseAmazon
- Umatshini weNespresso
- IiCD zoMculo ziyafumaneka
-Indawo yokusebenza enikezelweyo
-Izinto zangasese ezilungileyo
-Ukukhawuleza & kwi-Wi-Fi yasimahla
- Ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo
Siqinisekisa ukuhlala ngasese ngokupheleleyo. Akukho ukwabelana, akukho ziphazamiso.
Ibhotile epholileyo yewayini ilindele undwendwe ngalunye ekufikeni kwayo. Siye sabonelela ngeeti, ikofu, kunye
amashwamshwam ukuze konke okuseleyo ukuba ukwenze kukuphumla kwaye uzinze emva kohambo lwakho. Okanye ukuba uyathanda, ungonwabela ishawa ehlaziyayo, sinegumbi lokuhlambela ngezinto zangasese ezithambileyo.
Nceda uqaphele ukuba iToledo siSixeko samaXesha Aphakathi esinezakhiwo zakudala kakhulu. Ke ngoko, uninzi lwezakhiwo ngaphakathi kwiDolophu endala azinazinyusi. Le penthouse intle ibekwe kumgangatho wesine. Njengoko ingekho i-elevator, qiniseka ukuba ukwi-top-fit phambi kokuba ufike phezulu ukuze uphumle kwi-terrace enkulu okanye ngaphakathi kunye ne-airconditioning, ethi ipholise phantsi rhoqo ngokutyibilikayo.
48" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.95 · Izimvo eziyi-282
Le ndawo iyamangalisa unyaka wonke ukutyelela eToledo.
Iziko lembali laseToledo liSiza seLifa leMveli le-UNESCO, apho ixesha elidlulileyo elizukileyo likubulisa ngalo lonke ixesha.
Isixeko esidala sisichumisi sokuchumisa samaYuda, amaSilamsi kunye neenkcubeko zobuKristu, kwaye kwabaninzi
izakhiwo, uya kubona ukuba zonke ezi mpembelelo zidibene njani.
Uya kujonga kwimizobo yokuvuselela kwakhona kwaye ufumane malunga neeKumkani zaseSpain ezazilawula ubukhosi buphela baseToledo.
Ixesha eliseleyo uya kuzama ukufumana indlela yakho malunga nezitrato ze-labyrinthine ezifakwe kwiindonga zembali kwaye zikhuselwe ngamasango kunye neebhulorho ezinqatyisiweyo ezima zide kude kube namhlanje.
Imithwalo yokwenza kuzo zonke izinto ezinqwenelekayo, ukusuka kuhambo lwangaphandle lwabakhenkethi besixeko ukuya kukwahlulwa ngokupheleleyo kwabo bakhetha ikhaya elimnandi!
Umbuki zindwendwe ngu- Jose Y Alicia
Siya konwaba ukwenza zonke iimfuno zakho ngexesha lokuhlala kwakho ukwenza uhambo lwakho oluya eToledo lube lolungenakulibaleka.
Siza kuphendula nayiphi na imibuzo onayo, sinikeze indawo
iingcebiso kunye nemiyalelo njengoko kufuneka.
Ungalibazisi ukunxibelelana nathi ukuba ufuna nantoni na, ukusuka apha ukuya kwizindululo zasekhaya.
Siya kukuvuyela ukukunceda ngazo naziphi na iimfuno onokuba nazo ngexesha lotyelelo lwakho. Ngaphandle koko, siya kukushiya ukonwabele ukuhlala kwakho.
Siza kuphendula nayiphi na imibuzo onayo…
Inombolo yomthetho: 45012320282